Tattoo goobaabin iyo macnahooda | Tattoo
Tattoo goobaabin, calaamad daa'in weligeed ah
Susana godoy | | Tattoos leh qaabab
Dunida dhexdeeda shaybaarka joomatariyeedka waxaa jira dhowr qaab oo badan. Dhinac waxaan ka leenahay Tattoo saddexagalka (kaas oo server uu ka hadlay wax ka badan hal munaasabad) halka mid kale, waxaa jiri lahaa waxa loogu yeero Tattoo goobaabin. Iyo maya, uma jeedo wareegga Zen ama Luciano. Si toos ah qaabka joomatari ee aan u soo jiidanay tan iyo carruurnimada.
Tattoo goobaabintu waa wax caadi ah iyo tan iyo markii isbeddelku noqday moodada hindise oo ay la socdaan, ka Tattoos yar, ayaa dib u helay xitaa sumcad xumo ka dhex jirta istuudiyaha tattoo. Waa tattoo fudud laakiin dhib badan in la sameeyo. Waana haddii uusan tattooistku lahayn wadne garaac fiican, wuxuu ku samayn karaa duleelid dhab ah maqaarka. Waxaa la mid ah khadadka toosan iyo wixii la mid ah.
Macnaha iyo astaamaha goobeedku leeyahay (oo sidaan horeyba uga hadalnay Tatuantes dhawr sano ka hor) aad u xiiso badan. Wareegga, isagoo iskiis loo xiray matalayaa aakhiro, waadaxa ah iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqa wareega ee nolosha iyo wareeggeedii. Wax walba way isku xidhan yihiin dhaqdhaqaaquna waligiis ma dhammaan. Sidoo kale, gudaha Alchemy, goobadu waxay u taagan tahay dahab, birta ugu qaalisan.
Dhanka kale, Tattoo goobaabin sidoo kale waxaa la siiyaa nuxur ilaalin gaar ah. Waana in loo sameeyo dhaqan si loo ilaaliyo qof, goobaabin ayaa lagu sawiray iyada oo barta ku taal bartanka. Qodobkani waa nafta qofka aad rabto inaad ilaaliso. Tan iyo wakhtiyadii hore, saaxiriintii, saaxiriintii, iyo saaxiriintiiba waxay adeegsadeen noocyo kaladuwan oo goobo ah iyagoo ku guda jira dhaqankooda sixirka ah si ay ugu yeedhaan ruuxyada.
Adigana adigu, maxaad u maleyneysaa astaamaha goobaabinta? Wax ma haysaa U fiirso ururintaan sawirada oo ka faallo sidaad u aragto.
1 Sawirada Tattoos Goobaha
2 Noocyada wareegyada si loo sawiro
2.1 Wareeg fur
2.2 Wareega Zen
2.3 Wareegyo isku dhegan
2.4 Wareega Mayan
2.5 Wareegyada isdhaxgalka
2.6 Wareegga Celtic
2.7 Wareegga Chromatic
Sawirada Tattoos Goobaha
Noocyada wareegyada si loo sawiro
Noocyada noocan ah ee loo yaqaan 'tattoos' waxay yeelan karaan macno kala duwan. Laakiin runtu waxay tahay in fududaynta ka sakow, waa inaan sidoo kale ka hadalnaa astaan ​​kaamil iyo daa'in. Habka loo arko in waxyaabaha qaarkood aan waligood dhammaanin, iyada oo ay ugu wacan tahay qaabka wareega. Sidaa darteed, wareegyada kala duwan ee nolosha sidoo kale halkan ayey soo galaan. Badbaadintu sidoo kale waa mid ka mid ah macnayaasha aynaan ilaabi karin marka aan aragno tattoo leh qaabkan gaarka ah.
Runtu waxay tahay in adduunka ee tattoos, waxaan had iyo jeer leeyihiin naqshado aan dhammaad lahayn. Fudeyd ama minimalism sidoo kale waa isbeddel iyaga ka jira. Sidaa awgeed, astaamo ahaan oo xambaarsan astaamahan waxaan leenahay wareegyo furan. Waxay sidoo kale loo yaqaan Tattoo. Macno ahaan waxaan dhihi doonnaa waxay leeyihiin tan xoogga iyo sidoo kale xarrago iyo iftiinka gudaha. Intaa waxaa dheer, waxay sidoo kale u taagan tahay xad la'aan iyo isku dheelitirnaan, taas oo ah sababta loo tixgelinayo inay tahay astaan ​​muhiim ah oo ruuxi ah. Waxaa la socon kara labada khad madow iyo iyadoo la siinayo wax yar oo midab ah iyada oo ay ugu wacan tahay dhammaystirka biyo-biyoodka. Buddhistu waxay u taagan tahay in maskaxdu gebi ahaanba ka xor tahay jirka.
Wareegyo isku dhegan
Waxaan ka helnaa isla dhidibka ama xarunta iyo dhowr wareeg oo isku qaab ah. Magac ahaan, nooc ka mid ah muquuninta. Marka sawirkan ka hor, waxaan ka hadli karnaa macno cusub iyo kuwo kale, oo la mid ah kuwii aan ka faaloon jirnay. Marka dhinac ka mid ah waxay ka dhashaa dhimasho la'aan iyo sidoo kale daa'in, iyo waliba bilowyo cusub. Marka qofkaas ka adkaaday xoogaa jirro ah ama daqiiqado aad u adkaa oo nolosha ah, u door iyaga talaabo cusub oo la mid ah wax wanaagsan oo aan weli soo soconin. Waxay sidoo kale meteleysaa raadinta gudaha ee shaqsi kasta uu sameeyo inta uu nool yahay.
Dhaqanka Mayan iyo astaamahiisa labadaba marwalba si qarsoodi ah ayaa lagu daboolay, sanadihii oo dhan. Waa run in haddii aan ka fikirno tattoos, mid ka mid ah matalaaddeeda weyn badanaa lagu sameeyo qaab wareeg ah. Dhexdeeda, waxaan ku arki karnaa silhouettes aan dhammaad lahayn oo ah astaamo ama hieroglyphs. Qaar ka mid ah kuwa badanaa lagu soo uruuriyo astaantan ayaa ah Hunab Ku, oo lagu metelay goobada iyo taas astaan ​​u ah nabadda iyo dheelitirka. Haddii xayawaanka qaar lagu daro, sida gorgorka, waxay u taagan tahay xigmad ama jaguar, oo u dhigma nolosha ama taranka.
Markii aan ka fekerno tattoo leh wareegyo isku dhafan, waa inaan sidoo kale ka fikirnaa adduunka ugu xiisaha badan. Maaddaama ay matali karto astaanta Vesica Piscis. Marka tattoosku sidoo kale wuxuu matalayaa dhulka iyo ruuxa, maxaa yeelay waa midowgii labada adduun. In kasta oo ay sidoo kale iftiimineyso macnaheeda galmada dumarka.
Dhiirrigelinta loogu talagalay tattoos sidoo kale waxay nooga timaaddaa adduunka Celtic. Xaaladdan oo kale, waxaan ka hadli karnaa qulqulka 'Celtic', oo aan lahayn bilow iyo dhammaad toona, sidaa darteed ay xambaarsan tahay macnaha nolosha weligeed ah. Dabcan, dhanka kale, waxaan sidoo kale ka heli karnaa waxa loogu yeero gunti digaag. Kaas oo ah nooc ka mid ah gunti lagu soo dhex daray goobada. Xaaladdan oo kale, waxaan ka hadlaynaa a macnaha jacaylka weligiis ah.
Hal-abuurnimadu waa waxa ka mid ah waxa loogu yeero 'chromatic goobo' markii aan ku aragno sawirka. Waxay ku saabsan tahay amarka midabada iyo sidoo kale matalaadooda, halka aan ka helno labadaba midabada aasaasiga ah sida derisyadeeda. Dariiqo lagu siiyo macno midabbo badan abidkeed.
Sawirada: Pinterest, archzine.es, www.tattooers.net, tattooviral.com
Wadada buuxda ee maqaalka: Tattoo » Noocyada Tattoo-ka » Tattoos leh qaabab » Tattoo goobaabin, calaamad daa'in weligeed ah
Micno noocee ah ayuu meeris furan ku yeelan karaa geed dhexdiisa iyo shimbiraha qaar dibadda ah?
Ku jawaab Wilneider
Ururinta sawir gacmeedka khariidadaha, loogu talagalay safrayaasha runta ah!
Xiisadaha Tattoo iyo taariikhdeeda